डेक्सामेथासोन कोराना संक्रमितको उपचारमा कत्तिको प्रभावकारी ? – हिमालयन ट्रिबुन
डेक्सामेथासोन कोराना संक्रमितको उपचारमा कत्तिको प्रभावकारी ?
गम्भीर बिरामीहरूको दुखाइ कम गराउने औषधि डेक्सामेथासोनले बेलायतमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट गम्भीर बिरामीहरूको उपचारमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको दाबी गरिएको छ । बेलायतमा गरिएको परीक्षणले उक्त औषधिले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट ज्यान जोगाउन सक्ने देखाएको छ । यसलाई बेलायतको स्वास्थ्यसम्बन्धी निकाय नेशनल हेल्थ सर्भिस एनएचएसले तुरुन्तै प्रयोग गर्न सकिने बताएको छ । तर यो औषधि कस्तो हो? यसले कसरी काम गर्छ ?
डेक्सामेथासोन के हो ?
डेक्सामेथासोन स्टेरोइड हो । यो एक प्रकारको औषधि हो जसले शरीरमा दुखाइ कम गर्ने हर्मोनले जस्तै काम गर्छ ।
यो औषधिले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई ओसिलो बनाउँछ । शरीरले कोरोनाभाइरस लड्ने क्रममा उक्त सङ्क्रमणले जलन उत्पन्न गराउँछ । तर कहिलेकाहीँ प्रतिरक्षा प्रणाली अत्यधिक सक्रिय भइदिन्छ र यो प्रतिक्रिया घातक सिद्ध हुन सक्छ । सङ्क्रमणसँग जुझ्नका बनेका प्रतिरक्षाले नै शरीरका कोषलाई आक्रमण गरिदिन्छ । डेक्सामेथासोनले यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्छ । यो अस्पतालमा भर्ना गरिएका र अक्सीजन अनि भेन्टीलेटरको सहायता लिइरहेकाहरूका लागि मात्रै उपयुक्त छ । सामान्य लक्षण देखिएका व्यक्तिमा यो औषधिले काम गर्दैन ।
परीक्षणमा संलग्न वैज्ञानिकहरूका अनुसार औसतमा भेन्टीलेटरमा उपचारार्थ २५ जनामध्ये एकको मृत्यु हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । यो औषधिले अक्सिजन दिइएका आठ जनामा एक जनाको जीवन जोगाउने देखिएको छ । श्वासप्रश्वासमा समस्या नदेखिएका बिरामीहरूमा भने खासै फाइदा देखिएको छैन ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले गरेको परीक्षणबाट यो नतिजा प्राप्त भएको हो । उक्त अध्ययनले अन्य रोगका लागि प्रयोग गरिएका विद्यमान औषधि कोभिड १९ सङ्क्रमणको उपचारका लागि उपयोगी हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर परीक्षण गरिरहेको छ । परीक्षणका क्रममा करिब २,१०० बिरामीहरूले १० दिनसम्म छ मिलिग्राम डेक्सामेथासोन दिइएको थियो । उनीहरूको अवस्थालाई थप उपचार नगरिएका ४,३०० जनाबाट सङ्कलन गरिएको नमुनासँग तुलना गरिएको थियो । वैज्ञानिकहरूले क्रमिक रूपमा डेक्सामेथासोनलाई अन्य औषधिहरूसँगै प्रयोग गर्न सकिने र त्यसले मृत्युदर घटाउन सक्ने आशा गरेका छन् । यो औषधि वयस्कहरूका लागि पनि सिफारिस गरिएको छ। तर गर्भवती वा स्तनपान गराइरहेका आमाहरूले भने यसको प्रयोग गर्न नहुने बताइएको छ।
औषधिको उपलब्धता कस्तो छ ?
डेक्सामेथासोन सस्तो औषधि हो र यसको उत्पादन पनि राम्रै स्तरमा भइरहेको छ । बेलायतको सरकारले आफूसँग यसको पर्याप्त मौज्दात रहेको र त्यसले २००,००० मानिसको उपचार गर्न पुग्ने बताएको छ । नेपालमा भारतबाट धेरै आयात गरिए पनि एउटा स्वदेशी औषधि कारखानाले पनि उत्पादन गरिरहेको औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ । डेक्सामेथासोन सन् १९५७ मा बनाइएको थियो । लामो समयदेखि यो औषधि प्रयोगमा रहेका कारण यसको सर्वाधिकार कसैसँग पनि छैन । यसको अर्थ विभिन्न कम्पनीहरूले यसको उत्पादन गर्ने सक्छन् र यो औषधि विश्वभरि उपलब्ध छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले परीक्षणको नतिजालाई स्वागत गरेको छ ।
यसको प्रयोग के के मा हुन्छ ?
डेक्सामेथासोन विभिन्न रोगको उपचारमा प्रयोग हुन्छ । शरीर सुन्निनेदेखि दम र जोर्नीको दुखाइ कम गर्न यसको प्रयोग हुँदै आएको छ ।
के यसका साइड इफेक्ट छन् ?
डेक्सामेथासोनका निन्द्रा लाग्न गाह्रो हुने, तौल बढ्ने र शरीरमा तरल पदार्थ कम नहुने साइड इफेक्ट छन् । कुनैकुनै अवस्थामा आँखामा समस्या देखिन सक्छ। दृष्टि कमजोर हुनुका साथै रक्तस्राव हुन सक्छ। तर यी दुर्लभ छन् । कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरूले भने यसको कम मात्रा लिने हुँदा साइड इफेक्ट कम हुन्छ । इङ्गल्यान्डका प्रमुख स्वास्थ्य अधिकृत भन्छन्, ‘बिरामीहरूमा डेक्सामेथासोनको यो मात्रा प्रयोग गर्दा खासै हानि देखिएको छैन।’